Muuri News Network » Maxkamada Racfaanka oo maanta dib u furtay Kiiska C/raxmaan C/shakuur iyo khilaaf Cusub oo la ogaaday..
Maxkamada Racfaanka oo maanta dib u furtay Kiiska C/raxmaan C/shakuur iyo khilaaf Cusub oo la ogaaday..
Dec 27, 2017 - Comments off
Maxkamadda Racfaanka Gobalka Banaadir ayaa maanta dhageysatay Eedeymaha loo heesto C/raxmaan C/Shakuur oo ay soo diyaariyeen Xeer-ilaalinta Qaranka.
Dhinaca kale C/raxmaan C/Shakuur ayaa maanta ka maqnaa Maxkamadda oo laga sugayay waxa uuna soo dirsaday Qareenkiisa Abukaate Tahliil Xaaji.
Maxkamadda ayaa dib u celisay Qareenka C/raxmaan C/shakuur oo ay sheegtay in Abuukaate Tahliil Xaaji uusan wadan Warqad wakiilasho ah oo ka timid eedeysane C/raxmaan C/Shakuur fasax la’aantiisna uusan Difaaci Karin.
Maqnaanshiyaha iyo Wakiilasho la’aanta C/raxmaan C/Shakuur ayaa si rasmi ah loo ogeyn, balse warar ayaa sheegaya in uusan ku qanacsaneen arintaan maadaama ay Maxkamadda G/Banaadir hore u sheegtay in aysan Xeer-ilaalinta Qaranka qaadan Karin Racfaan.
Dadka Sharci yaqaanada ah ayaa sheegaya in Maxkamadda G/Banaadir ay ku qaldaneed go’aankii ahaa in Racfaan laga qaadan Karin Dacwadda Siyaasi C/raxmaan C/shakuur.